လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,600 သိန်း (ကျပ်) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
15 Sep 2020 1:55 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
3884 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး |	ကြော်ငြာနံပါတ် S-8664853
လုံးချင်းအိမ် 1 ခန်း 1 ခန်း
*** Covid. ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္။
- - ဒီဇင္ဘာသီရိေဂယာအိမ္ယာဝင္း,အမွတ္၂လမ္းမႀကီး ေပၚ,စီးပြားေရးတကၠသိုလ္အနီး,ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ အမွတ္၂လမ္းမႀကီး ေပၚ႐ွိ ဝင္ေပါက္မုတ္ဉီးအနီး,ျခံ အမွတ္(၃၀),အက်ယ္အဝန္း‌ေပ (၅၅ x ၇၂) ႏွစ္၆၀ ဂရန္ ပိုင္႐ွင္အမည္ေပါက္,တထပ္တိုက္ေပ (၁၈ x၂၀) ေရ မီးအစုံ,အဲကြန္းတလုံးတပ္ထားသည္။
-- အိမ္ တြင္းေရခ်ိဳးခန္း,ဘိုထိုင္အိမ္သာ,
-- အိမ္ေဘးျခံဝင္းအတြင္းတြင္ တယ္လီဖုန္းတာဝါတိုင္
MPT,MYTEL,TELENOR အတြက္ ငွားရမ္းထားသည္။ တစ္
ႏွစ္ အတြက္ (၇၅) သိန္းရမည္။
-- (၁၅x၄၀) အလုံးစုံျပင္ၿပီး,ေရမီးအစုံ,ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာတြဲလွ်
ေဈးႏႈန္း သိန္း (၁၆၀၀)
*** Covid. ကာလအထူးလျှော့ဈေးဖြင့်ရောင်းမည်။
- - ဒီဇင်ဘာသီရိဂေယာအိမ်ယာဝင်း,အမှတ်၂လမ်းမကြီး ပေါ်,စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အနီး,ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်၂လမ်းမကြီး ပေါ်ရှိ ဝင်ပေါက်မုတ်ဉီးအနီး,ခြံ အမှတ်(၃၀),အကျယ်အဝန်း‌ပေ (၅၅ x ၇၂) နှစ်၆၀ ဂရန် ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်,တထပ်တိုက်ပေ (၁၈ x၂၀) ရေ မီးအစုံ,အဲကွန်းတလုံးတပ်ထားသည်။
-- အိမ် တွင်းရေချိုးခန်း,ဘိုထိုင်အိမ်သာ,
-- အိမ်ဘေးခြံဝင်းအတွင်းတွင် တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်
MPT,MYTEL,TELENOR အတွက် ငှားရမ်းထားသည်။ တစ်
နှစ် အတွက် (၇၅) သိန်းရမည်။
-- (၁၅x၄၀) အလုံးစုံပြင်ပြီး,ရေမီးအစုံ,ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျှ
ဈေးနှုန်း သိန်း (၁၆၀၀)
55 ေပ x 72 ေပ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8664853 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
1,450 သိန်း (ကျပ်)
SH4-002183, For Sales, ပေဒသာလမ္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္...
SH3-002670, For Sales House, Zayar Street, 18 Ward, Dagon Myothit (South) Township တြင္ လုံးခ်င္း (၁ထပ္) အိမ္ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
SH3-002650, For Sale House, Su Paung St, Bahan Tsp တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ (1.5RC) ေရာင္းရန္ ရွိပါသည္။
သူရလမ္​း၊ ​ေတာင္​ဥကၠလာ၊ (9)ရပ္​ကြက္​၊ တြင္​ 20'x60'၊ BN-2, ​ေရ၊မီး၊ ဂရန္​​ေျမ၊...
(7) မုိင္ AD တြင္ ေနရာေကာင္း လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္းတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္
$ 2,800 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
မြယမုံ Sony နေရာကောင်း လမ်းမတန်း ထောင့်ကွက် အမြန်ရောင်းမည်
8,500 သိန်း (ကျပ်)
မောင်းမကန်လမ်းမပေါ် ဂိုထောင် ရောင်းမည်.
Sqft (6393) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ